Mayelana isiphetho nzima komuzi ne-Leningrad ukuvinjelwa phakathi yiMpi Enkulu Yobuzwe, it is kuwo wonke umuntu ezaziwayo. Iminyaka ihamba, futhi kancane kancane sikhohlwe ezethusayo nalezo zikhathi ezibucayi emlandweni wezwe, kanye nezigigaba eziningi amasosha ibutho lethu. Ukuze uvuselele izinkumbulo impi futhi ukufunda okuthile okusha ngokwakho, vakashela i-Museum of Siege of Leningrad. Ngo lanamuhla Petersburg lapho tisebenta kakhulu ngendlela ezimbili embukisweni ngokuphelele abazinikezele ukuba ukuphila edolobheni ngesikhathi yiMpi Enkulu Yobuzwe.
Indawo egcina amagugu esizwe Wezokuvikela kanye Siege kweLeningrad e usawoti alley
embukisweni lokuqala enikelwe ukuphila abakhileyo emzini ezinsukwini empi lavulwa ngo-1944. Kuyaphawuleka ukuthi ukuvinjelwa kweLeningrad Museum yadalwa isikhathi esinzima ezinjalo - ngale isisekelo nguye kuphela kulo lonke izwe lakithi. Eqoqweni yakhe ungabona ziphephile elalinikezelwe izinsuku impi, izakhamuzi ukusebenza ezimbonini, kanye izinto ezihlobene ne endleleni yokuphila futhi ekuphileni kwansuku zonke abavikeli zaleli dolobha. Zonke lezi izikripthi - yangempela izibhamu amasosha, ifomu nezimpahla siqu amasosha. Nokuvinjelwa Leningrad Museum ine eqoqweni layo kanye wezikhali esindayo, kanye obonisa ezinye izinhlobo izindiza kanye amathangi. Lokhu embukisweni ngokushesha wathandana abakhileyo inhlokodolobha enyakatho, kodwa naphezu kwalokhu Eqinisweni, bevale ngo-1949 ukuba wenze uphenyo olunzulu esisemthethweni. Abaningi ziphephile zisusiwe noma ubhujiswe ngamabomu. Nalapha ukuvula iminyango yalo kuzivakashi Museum ayengakwenza kuphela ngo-1989. Namuhla iqoqo yakhe futhi yayiqhubeka ikhula. Ezinye izinto ulethe Veterans nezihlobo zabo, ngezinye izikhathi lapha ifike imivubukulo.
Diorama anikezelwe ukuphumelela nokuvinjelwa Leningrad
Ngo-1970, kwaqala umsebenzi ukudalwa yisikhumbuzo anikezelwe ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe, ku Kirov esifundeni (Leningrad esifundeni). Ngo-1985 kukhona Museum-diorama wavulwa namuhla, igama elivamile «Phula Siege of Leningrad", sifaka nezikhumbuzo owaziwa "Sinyavsky ukuphakama" futhi "saseNevsky Spot", kanye nabanye abaningana izikhumbuzo. Yobuciko ngendwangu diorama has a usayizi 40 by 8 amamitha. It wadalwa iqhaza labayali eziningana abahlonishwa lempi. Lokhu umbukiso ubonisa ukusebenza umcimbi eyisisekelo "Sparks", olwadonsa izinsuku eziningi 7 ngoJanuwari 1943. Indawo egcina amagugu esizwe "Breakthrough we ukuvinjelwa kweLeningrad" Ubuye iqoqo nezempi elise ngaphandle. Omunye ziphephile ezithakazelisayo kunazo - KV- 1, nengxenye izimpi futhi ngawakhulisa kusuka phansi iNeva.
Amakheli main nokuchaza samasosha zomlando kweLeningrad
Museum of Siege of Leningrad itholakala Petersburg eSalt Lane, 9. iminyango zako ziyizindlela livulekele izivakashi kusukela 10.00 kuya 17.00 ku zonke izinsuku ngaphandle ngoLwesithathu. NgoLwesine lokugcina lwenyanga luwusuku yokuhlanza, futhi ukuchayeka iyatholakala ukuze ihlolwe. Imyuziyemu-diorama sise: Leningrad esifundeni, Kirovsk, Pionerskaya st, indlu 1. It livulekele sokuhambela izivakashi on zonke izinsuku ngaphandle ngoMsombuluko, kusukela 11,00. Phakathi embukisweni ehlobo uvala at 18,00, futhi ebusika - ku 17.00. Museum of Siege of Leningrad inamagatsha. I ezithakazelisayo kunazo - "Green Belt Inkazimulo". Lokhu yesikhumbuzo kumaka endaweni lapho bebehlala khona ime amabutho esitha yonkana Leningrad esifundeni.
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi ukubala ophahleni?